First Booqo Esthesia Care Qalliinka Oral, P.A., Bloomington MN
ballan hore Your ka koobnaan doonaan wada tashi ah oo sharxaya xanuunkaaga iyo kala doorashada daaweynta. Waxaad u baahan doontaa inaad preregister online adigoo buuxinaya foomamka bukaanka online diiwaangelinta. Mararka qaarkood, qalliin lagu samayn karaa isla maalintaas sida tashiga. Si kastaba ha ahaatee, Qorshaha taariikhda ama daaweyn caafimaad adag u baahan doontaa qiimayn iyo ballan labaad si ay u bixiyaan daaweyn maalin kale.
Fadlan naga caawin by bixinta macluumaadka soo socda ee wakhtiga aad wada tashiga:
Your warqada gudbinta qalliin iyo wax kasta oo cudur-x-rays, haddii la heli karo, waxaa looga baahan yahay.
Liiska daawooyinka aad hadda qaadato oo ay ku jiraan supplements.
Haddii aad leedahay caymis caafimaad ama ilkaha, keenaan foomamka loo baahan yahay dhameystirtay. Tani waxay badbaadin doonaa waqti iyo noo oggolaan in ay kaa caawiyaan geedi socodka wax sheegashooyinka.
MUHIIM AH: Dhammaan bukaanka da'doodu ka yar tahay 18 sano jir waa inuu la socdaa waalid ama masuul ee booqasho tashiga.
Maalinta qalliinka fadlan u leeyihiin in ay cunaan ama cabbaan siddeed saacadood ka hor inta aan qalliinka waxba. Si kastaba ha ahaatee, Waxaa laga yaabaa in aad leedahay ilaa biyaha ilaa laba saacadood ka hor qaliinka. Qofka mas'uul ka, 18 jir ama ka weyn,waa in la joogo noqon ballanta aad qalliin si ay u bilaabaan. Qofkani waa in uu joogaa xafiiska oo idiin eryo guriga qalitaanka ka dib.
Fadlan u digto xafiiska haddii aad leedahay xaalad caafimaad oo laga yaabo walaac ka hor qaliinka (i.e., macaanka, cadaadis dhiig oo sareeya, khaanadaha wadnaha macmal ah iyo kala-goysyada, qandho rheumatic, etc.) ama haddii aad hadda qaadato wax daawo (i.e., daawooyinka wadnaha, aspirin, therapy xinjirowga, etc.).
Haddii dhakhtarkaaga ilkaha ama dhakhtarka ayaa x-rays, waxaad codsan kartaa in ay gudbiyaan xafiiskayaga. Haddii aanay jirin waqti ku filan, fadlan soo qaado oo waxay iyaga keeni xafiiskayaga. Haddii filimada dheeraad ah loo baahan yahay, ay la qaadan karaa at our xarunta.